App Lock, hifehezana ny tsiambaratelo an'ny Android | Androidsis
App Lock, iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hifehy ny fiainana manokana an'ny Android-nao
Te hifehy tanteraka ny Android ve ianao raha resaka fiainana manokana? Raha ENY mafy ny valiny dia tsy azonao atao ary tsy tokony holalanao ny tolo-kevitra anio satria ho ahy izany iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hifehezana ny tsiambaratelo an'ireo terminal Android anay.
Fampiharana taloha fantatry ny maro ankehitriny izay misy fampiasa vaovao nampiana, Manohana ny fiarovana ny rantsantananao Android, tsy mila manome alalana ara-pitantanana, izany hoe tsy mila manantona manager manager mba tsy hilaozana ny fiasan'ny rantsantanan'ny fitaovantsika Android.
Ny fangatahana resahina dia mamaly ny anaran'ny Hidy AppLock, azontsika atao maimaim-poana izany ao amin'ny Google Play Store miaraka amin'ny safidin'ny doka mifangaro sy ny fividianana fampiharana, na dia efa nolazaiko taminao aza izany farafaharatsiny Tsy mila mampiasa ny iray amin'ireo fividianana aho mba hahazoako tombony betsaka amin'ny fampiharana.
0.1 Sintomy ny AppLock Lock maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store amin'ny fipihana ity rohy ity
1 PhotoLock Image Gallery
Sintomy ny AppLock Lock maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store amin'ny fipihana ity rohy ity
Ny fampiasa lehibe izay atolotry AppLock antsika dia tsy iza fa ny an'ny afaka mampiditra hidin-trano amin'ireo rindranasa napetraka ao amin'ny Android anay hiarovana azy ireo amin'ny fidirana tsy nahazoana alalana Na dia mihidy sy miasa aza ny terminal Android-anay.
Ity karazana hidin-trano ity ankoatry ny afaka atao amin'ny lamina na teny miafina mahazatra, Ankehitriny dia ekeny ihany koa ny fanaingoana default an'ny dian-tananay voasoratra ao amin'ny fipetrahan'ny terminal Android anay. Fandrosoana mialoha be sy fampiasa be ity satria manome antsika fampiononana lehibe nefa tsy very ny iota fiarovana.
Ankoatry ny fahafahanao manakana sy miantoka ny fidirana amin'ireo rindranasa alaina sy apetraka amin'ny Android, na ny rindranasa na ny fampiasa amin'ny rafitra toy ny fampiatoana ny fampifandraisana ny data, ny Bluetooth ary ny Wifi, Izy io koa dia manana safidy hanakanana mandeha ho azy izay rindranasa vaovao napetraka ao amin'ny fitaovantsika Android, na alaina amin'ny Play Store amin'ny fomba ofisialy izany na raha apetrantsika ivelany amin'ny alàlan'ny fisintomana ny rakitra apk.
Toy ny hoe toa tsy ampy izany, dia manana ihany koa fitaovana fiarovana toy ny vault mba hitazomana manokana ny sarinay sy ny horonan-tsarinay ary tsy azo idirana afa-tsy amin'ny safidin'ny tranokala anao manokana. Safidy iray hafa hanasongadinana ny fakana sarin'olon-tsy fantatra izay nanandrana niditra Android fa tsy nahalala ny lamina hamaha na ny teny miafina.
Avy eo manana safidy mahasalama toy ny hery izy io mamorona mombamomba antsika manokana, mamela ny fampiharana izay tiana ho sakanana rehefa mampandeha ilay profil voalaza etsy ambony miaraka amina tsindry tokana, manana safidy tena ilaina koa izy io ahafahantsika alefaso ny piraofilina arakaraka ny toerana misy anay mifototra amin'ny tamba-jotra Wi-Fi izay ifandraisantsika.
Ohatra, rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra ampahibemaso fantatra amin'ny hoe cafeteria ankafizinay izahay, dia azontsika atao ny mamela ilay safidy ka rehefa mifandray amin'ilay Wifi manokana isika, ny fiarovana lehibe indrindra manakana ny rindranasa rehetra izay namboarinay avy amin'ny fikirakirana fampiharana.
Saingy ho an'ireo rehetra izay tsy fantatry ny safidy sy fampiasa rehetra ireo dia manana ihany koa izahay Browser incognito tafatsangana ao anaty fampiharana, faritra ahafahantsika mifandray soa aman-tsara amin'ireo tambajotran-tseraserantsika toa ny Twitter, Facebook, Google+ ary Linkedin nefa tsy mila apetraka akory ireo rindranasa tany am-boalohany.
Noho izany rehetra izany sy ny maro hafa toy ny mety misintona sy mampihatra lohahevitra na hoditra maimaimpoana mba hanomezana fikitika hafa ilay fampiharana ary aorian'ny fitsapana azy tsara mandritra ny andro vitsivitsy dia tonga tamin'ny fehin-kevitra aho fa AppLock dia iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra hifehy sy hiarovana ny tsiambaratelo amin'ireo terminal Android anay nefa tsy mahafoy ny fampiasa izay omen'ny hidin-tànan'ny Android antsika.
Ampidino eto ny App Lock
PhotoLock Image Gallery
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » App Lock, iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hifehy ny fiainana manokana an'ny Android-nao
Samsung dia manolotra amin'ny fomba ofisialy ny Galaxy A6 sy Galaxy A6 +, ny tsipiriany ary ny fiasa
Diso fanantenana ny varotra Galaxy S9 any Korea Atsimo